Dacwad kale oo patent ah, oo hadda ah Aqoonsiga Taabashada | Wararka IPhone
Dacwad kale oo patent ah, hadda ah Aqoonsiga Taabashada
Ma aqaano inay arrintu kugu caajiso inta ay aniga ila tahay, Ma rajaynayo, oo ugu yaraan waxaad kubixinaysaa shan daqiiqo akhrinta khadadkaan, laakiin si kadis ah, Apple ayaa markale lagu dacweeyay inay ku xad gudbeen rukhsadaha alaabada "duugga ah".
Munaasabaddan awgeed, shirkad Kuuriyaan ah ayaa dacwad ku soo oogtay shirkadda Cupertino ka dib markii ay ku xadgudubtay rukhsaddeeda horumarinta aqoonsiga 'Touch ID'. La yaab leh ugu yaraan haddii aan tixgelinno inaan ka hadlayno tiknoolajiyad ay soo bandhigtay Apple agagaarka 2013.
Laakiin waa war iyo Actualidad iPhone ma rabno inaad gebi ahaanba ka maqnaato waxa ka dhacaya adduunka Apple. Macluumaadkan ku saabsan dacwadda ay soo gudbisay shirkadda 'Firstface' waxaa la wadaagay kooxda isgaarsiinta ee dhexdhexaadka The Korea Herald, iyada oo la siiyay in lagu sii hayo tiknoolajiyadda hadda. Waxay ahayd aasaasihii sumadda kaas oo ka digay in nidaamka aqoonsiga biometric-ka ee adeegsada Touch ID ay soo saartay astaamihiisii ​​sanadkii 2011. Su'aasha halkan ku taal, xitaa haddii ay taasi run tahay, waa: Apple miyuu horumariyay oo uu hirgaliyay Aqoonsiga Taabashada laba sano gudahood? Waa in la arkaa, si daacad ah ayaan uga shakisanahay, degdegu ma ahan la taliyaal wanaagsan, haddii aysan aheyn inay u sheegaan Samsung iyo akhristahiisa Galaxy S5.
Firstface iyo fuliyayaasheeda ayaa si cad u lehIn kasta oo xaqiiqda ay ku qaadatay in ka badan shan sano inay dacwadda fayl gareeyaan, haddana waxay rabaan inay jeex wanaagsan ka qaataan wax kasta oo ay Apple ku gaadhay taabashada 'ID ID', iyo waxyaabo kale, iyaga oo dimoqraadiyeeynaya. Dhibaatadu waxay ku jirtaa sida caadiga ah, in wax waliba ay muujinayaan inaan mar kale wajaheyno kiis cad oo ah "Troll of patents", shirkadaha ku takhasusay ganacsiga noocan ah oo leh fikradda kaliya ee ah in laga dacweeyo shirkadaha waaweyn si ay u gaaraan heshiisyo aakhirka sameeya aad hodanka ah gebi ahaanba waxba ka badan iibsashada iyo iibinta shatiyada aan macquul ahayn, ma ogaan doontid goorta biibiilaha la ciyaari doono. Waan sii wadi doonnaa kiiska inkasta oo aan qiyaaseyno inay ku sii jiri doonto biyo xoog leh sidii marar badan oo hore ugu dhacday dhacdadan oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Dacwad kale oo patent ah, hadda ah Aqoonsiga Taabashada
in la dacweeyo? (Baaragaraafka labaad)
Ku jawaab faneed
HomePod ayaa is dul saaran armaajo, Apple ma iibinayo
Apple waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto tartan maalinta Earth u gaar ah guulo cusub iyo istiikarada